Gaadiidka TCDD si Loogu Soo saaro Makiinada Shaqaalaha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraGaadiidka TCDD wuxuu soo iibsan doonaa shaqaaleynta shaqaalaha
TCdd gaadiidka ayaa ka dhigi doona iibsashada shaqaale shaqaale
TCDD Gaadiidka Agaasimaha Qeybta KPSS iyada oo aan loo baahnayn shaqaalayaasha Machinistayaasha ayaa la kiraysan doonaa.
Musharixiinta lagu darayo liiska si ay u ogeysiiyaan IŞKUR waxay ku soo gudbin doonaan dukumiintiyada taariikhda 08.08.2019-09.08.2019. Musharrixiinta waxay shakhsi ahaan u keeni doonaan dukumiintiyada. Haddii ay dhacdo tirada codsadayaasha soo gudbiya dukumiintiyada iyo dukumentiyada la aqbalo waxay ka sarreysaa 20, musharaxyada qaadaya imtixaanka afka waxaa lagu soo qaadi doonaa jinsiyada dadweynaha iyada oo jumladaha 4 ee tirada shaqaalaynta. Musharixiinta waxaa lagu go'aamin doonaa wax badan sida ugu badan ee musharaxiinta asalka ah iyo musharrixiinta beddelka ah la waydiisan doono inay soo gudbiyaan dukumiintiyada si ay ugu tartamaan musharixiinta beddelaya dukumintiyada asalka ah ama dukumintiyadoodu aysan habboonayn. (Tusaale ahaan, haddii tirada codsadayaasha la aqbalo ay ka yaryihiin 20, ma jiri doonaan barbaro, haddii 30 la qaado sawirka dadweynaha hortiisa, qofka 20 waxaa loo magacaabi doonaa musharraxa ugu weyn, qofka kale ee 10 noqon doona musharaxa bedelka ah. Haddii qofka 40 uu yahay musharaxa ugu weyn, qofka 20 waxaa loo magacaabi doonaa bedelaad badan.)
Haddii ay lagama maarmaan noqoto in badan oo ka horaysa dadwaynaha, waxaa lagu qaban doonaa 22.08.2019 oo ku yaalla TCDD Shir Wadaagga Guud. Natiijada natiijooyinka www.tcddtasimacilik.gov.t waa ayaa lagu dhawaaqi doonaa. (Musharaxiinta raba inay wax badan sameeyaan)
Waxaad ku daawan kartaa.)
Imtixaanka afka ah waxaa lagu qaban doonaa Agaasimaha Guud ee TCDD Tasimacilik AS. Taariikhaha imtixaanka afka ah iyo natiijooyinka http://www.tcddtasimacilik.gov.tr lagu shaacin doonaa at.
Mihnadlaha shaqaalaha ee ku dhawaaqaya qoraalka Riix halkan
TCDD Gaadiidka Gaadiidka ee Machadka
Safaaradaha ayaa la joojiyey Bursaray Sababtoo ah Dhibaatada Korantada